विन्टर डिप्रेसन ! किन हुन्छ ? कसरी बच्ने ?
Friday, 1 Feb, 2019 9:52 AM
काठमाडौं । सामाजिक र जीवनमा आइपर्ने विभिन्न समस्या, अशान्ति वा मनले चिताएको काम पूरा नभएको अवस्थामा मानिसको दिमागमा असर पर्नसक्छ । मानसिक रोग सबै एकै प्रकारको हुँदैन । डिप्रेसन मानसिक रोगको एक प्रकार हो । र डिप्रेसनभित्र पनि धेरै प्रकार हुन्छ । त्यसमध्ये विन्टर डिप्रेसन एक हो । विन्टर डिप्रेसन विशेषगरी चिसो मौसममा हुनेगर्छ । गर्मी मौसममा विन्टर डिप्रेसन हुँदैन । यसलाई सिजनल डिप्रेसन भनिन्छ भने मेडिकल भाषामा एफेक्टिभ डिसअर्डर पनि भनिन्छ ।
मौसम परिवर्तन भएलगत्तै हुने डिप्रेसनलाई सिजनल डिप्रेसन भनिन्छ । जुन गर्मी मौसममा नभई जाडो मौसममा मात्र हुन्छ । मानिसको मन एकैनासको हुँदैन । हरेक स–साना कुराले मानिसको दिमागमा प्रभाव पर्छ । मौसम परिवर्तन भएजस्तै मानिसको मन पनि परिवर्तन भइरहन्छ । कहिले दुःख, कहिले हाँसो र कहिले खुसी। जीवनको चक्रसँगै मानिसको मन पनि घुमिरहेको हुन्छ ।
किन हुन्छ विन्टर डिप्रेसन ?
जाडो मौसममा दिन छोटो र रात लामो हुन्छ । जस कारण धेरै समयसम्म घामको प्रकाशबाट टाढा बसिन्छ । व्यस्तताले भरिएको जीवनमा जाडोमा चिसोबाट बच्न सबैले अनेकौं उपाय अपनाउने गर्छन् । ग्यास हिटर, बाक्लो कपडा र तातो जुत्ताको प्रयोग गर्छौं । तर सूर्यको किरणले दिने तातो र अन्य हिटर वा कपडाबाट लिने तातोमा धेरै फरक हुन्छ ।
जाडोमा सूर्यको किरण खासै पर्दैन । शरीरमा पाइने सेरोटोनिन हर्मोन घामको प्रकाश शरीरमा पर्दा मात्र पाउन सकिन्छ । घामको आवश्यक किरण शरीरले नपाउनाले न्युरो केमिकल सेरोटिनिनको प्रयोग कम हुने गर्छ । न्युरो केमिकल सेरोटिनिनको कमीले विन्टर डिप्रेसन हुन्छ ।
जाडोयाम सुरु हुनेबित्तिकै अल्छी लाग्ने, काममा जाँगर नलाग्ने, शरीर कमजोर हुने र थाक्ने, निराश हुने, बढी खाना खान मन लाग्ने, वढी निद्रा लाग्ने र घाम प्यारो लाग्ने जस्ता बानी जाडोमौसममा सबैले गर्छन् । यी समस्या जाडो मौसममा मानिसले गर्ने सामान्य समस्या हो । तर यसलाई डिप्रेसन भन्न मिल्दैन ।
जाडोमा बादल लाग्ने, कुहिरो लाग्ने र घामबाट टाढा बस्न बाध्य हुने समस्या हुनेगर्छ । मानिसको शरीरले रातको समयमा मेलाटोनिन भन्ने हार्मोन उत्पादन गर्छ । यो हर्मोनले बढी निद्रा लगाउँछ । जाडो मौसममा यो सामान्य मानिन्छ । तर जो रागी हुन्छन, उनीहरुलाई अझै बढी प्रभाव पार्छ ।
विन्टर डिप्रेसन महिला, बालबालिका र बूढापाकामा बढी हुन्छ । सामान्य अरु मानिसलाई भन्दा यस्ता व्यक्तिलाई घामको किरण बढी आवश्यक पर्छ । विशेषगरी युरोपेली देशहरुमा यो समस्या बढ्ने क्रममा छ । ६ महिना दिन र ५ महिना रात हुने मुलुकमा विन्टर डिप्रेसन बढी हुने गरेको छ ।
विन्टर डिप्रेसनका लक्षण
मन उदास र दुःखी हुनु, खुसी बन्न नसक्नु, झर्को लाग्नु, रुन मन लाग्नु र कुनै पनि कुरामा ध्यान नहुनु यसका लक्षण हुन् । जाडो मौसममा यी लक्षणहरु दुई हप्ताभन्दा बढी लगातार देखिएमा विन्टर डिप्रेसन भएको भन्ने बुभ्नुपर्छ । डिप्रेसन हुँदा निद्रा नलाग्ने, खान मन नलाग्ने, तौल घट्ने जस्ता असामान्य लक्षण देखापर्छन् । तर विन्टर डिप्रेसन हुँदा यसको उल्टो हुन्छ । विन्टर डिप्रेसनमा निद्रा बढी लाग्ने, धेरै खाना रुच्ने, तौल बढ्ने जस्ता लक्षण देखापर्छन् ।
विन्टर डिप्रेसन भएमा घाम लाग्ने ठाउँमा बस्नुपर्छ । नेपाली समाजमा घाममा बस्ने, तेल लगाउने, सुन्तला र बदाम खाने, चिसोमा पिकनिक जाने, नाच्ने र गाउने चलन छ । यस्ता क्रियाकलापले सेरोटिन उत्पादन गर्छ । ओमेगा ३ भएको खानेकुरा खानुपर्छ । माछा र आलसमा ओमेगा ३ को मात्रा धेरै हुन्छ । विन्टर डिप्रेसनका रोगीलाई कृत्रिम ताप दिएर लाइट थेरापी दिने गरिन्छ । विदेशमा यो लाइटको प्रयोग गर्दै थेरापी दिइन्छ । जसले घामले जस्तै तातो किरण दिन्छ । तर कोठामा बसेर हिटर ताप्दैमा र तातो लुगा लगाउँदैआ यो समस्यबाट बच्न सकिन्न ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांकअनुसार विश्वमा कुल जनसंख्याको २५ प्रतिशत मानसिक रोगी छन् । ४५ करोड मानिसमा मानसिक समस्या छ भने ३५ करोडमा डिप्रेसन छ । मानसिक रोगकै कारण विश्वमा प्रत्येक वर्ष आठ लाख मानिसले आत्महत्या गर्छन् ।
नेपालमा प्रत्येक वर्ष पाँच हजारभन्दा बढी मानिसले आत्महत्या गर्छन् भने प्रत्येक दिन १२–१५ जनाले आत्महत्या गर्छन् । यीमध्ये ९० प्रतिशतले मानसिक रोगका कारण आत्महत्या गर्छन् ।